Nahoana no Skype tsapaka akaiky? - Skype
Tena > Skype > Skype mifarana tsapaka - mety ho vahaolana
Skype mifarana tsapaka - mety ho vahaolana
Nahoana no Skype tsapaka akaiky?
Tsy misy fantatra ny antony mahatonga nySkype foanadoza ho an'ny mpampiasa sasany. Matetika,fahasimbanatatitra avy amin'ny Windows 10 rafitra mpampiasa taorian'ny fanavaozam-baovao.
Aoka hojerentsika ny fomba hanombohana ny resaka manokana (farany-to-end voaaro) ny Skype. Mba hanaovana izany, dia mila misintona vaovao dikan-Skype. Jereo ny famaritana ny rohy.
Rehefa hanokatra ny Skype, jereo amin'ny ankavia bara mitsivalana, ary hahita ny bokotra +. Tsindrio eo izany mba hanomboka ....
Fanteno ny 'New Private Conversation' safidy hanombohana izahao sy mifidy ny fifandraisana tianao ny hanana tapitra-to-end voaaro amin'ny resaka. Alefaso ny fanasana vaovao ho an'ny tsy miankina amin'ny chat amin'ny fipihana ny bokotra etsy ambany. Ny olona eo amin'ny farany hafa dia tokony hanaiky ny fangatahanao hanomboka ny amin'ny chat.
Azonao atao ny manomboka ny resaka raha vao ny fangatahana amin'ny chat efa nanaiky. Ary izany rehetra ny hafatra sy antso no farany-to-end fanalahidy voaaro amin'ny tsy miankina. Tsy misy olona, ​​anisan'izany ny NSA, tsy afaka mamaky na handrenesana azy tampoka ny resaka.
Rehetra tokony ho azo antoka dia ny hanamafy ny fiarovana ny amin'ny chat fehezan-namana. Tsindrio ny hidin-trano kisary etsy ambany zo hahazo ny fehezan-dalàna. Raha ny fantatro, lahatsoratra antso farany dia tsy amin'izao fotoana izao-to-end voaaro.
Raha vao ny resaka manokana dia ny, dia afaka hanidy ny fifandraisana. Ao amin'ny varavarankely amin'ny chat, tsindrio eo ambanin'ny ny anaranao. Izany no hanokatra ny mombamomba azy, horonan-taratasy teo.
mikorontana hatrany i cortana
Ary mifidy ny safidy Farany resaka tsy miankina. Toy izany ve ianao tendron'ny? Mba omeo ny ankihiben-tànany ka na hanoratra any amin'ny fantsona lahatsoratra bebe kokoa. Misaotra! Toy izany ve ianao tendron'ny? Mba omeo ny ankihiben-tànany ka na hanoratra any amin'ny fantsona lahatsoratra bebe kokoa.
Ahoana no hanamboarako ny fikorontanan'ny Skype amin'ny Windows 10?
Raha hitokantokana ny olana dia araho ireto dingana etsy ambany ireto:
Sokafy ny menio Start ary kitiho ny setting.
Kitiho ny Apps.
Mitadiava ary kitihoSkypeavy amin'ny lisitry ny Applications.
Kitiho ny safidy Advanced.
Safidio ny famerenana.
Atsangano indray ny fitaovana ampiasainao.
Nahoana i Skype tsy hiasa?
Azonao atao ihany koa ny miezaka ireto dingana manaraka ireto ho fanampiana fanampiny: Hamarino ny fitaovanamanananymiasafifandraisana Internet amin'ny fantsom-pifandraisana ilaina. Hamarino fa manana ny kinova farany an'nySkype. Zahao ny rindrambaiko fiarovana na ny fikirakirana Firewall anao hahazoana antoka fa tsy manakana izy ireoSkype.
Izay tokony hatao raha mitandrina Skype fanakatonana ho Anao?
Na dia eo aza ny maha-lehibe hafatra fampiharana avy hatrany, maro ny mpampiasa nitatitra fa Skype famaranana ho azy ireo foana. Mba manamboatra io olana io, dia mila reset Skype any amin'ny toerana misy anao na ny vaovao farany ho an'ny dikan farany. Moa ve ianao manana Skype fanampiny olana?
Nahoana i Skype hanakatona?
Zavatra antoko Software Issues. Na hoe raha Skype manakimpy tampoka dia ny fahatelo-antoko fampiharana no fitsabahana sy mahatonga ny olana. Raha nanomboka ny olana mitranga vao haingana taorian'ny rindrambaiko fiovana, izao mety ho antony ny fakany. Hanakatona misy fototra rindrambaiko izay tsy ilaina raha nihazakazaka Skype - indrindra indrindra na ...
Izay tokony hatao raha tsy Skype hisokatra eo aoriana?
Ao amin'ny Background Apps varavarankely, horonan-taratasy nandritra ny lisitry ny fampiharana sy mankarary ny Toggle akaikin'ny Skype. Reboot ny solosaina ka mamoha ny biraonao dikan-Skype indray. Tsy tokony hanakatona tampoka intsony. Raha tsy hamaha ny olana na fomba io dia tsy azo ampiharina amin'ny zava-misy, hifindra ho amin'ireo fomba manaraka.
manambatra kahie onenote
Inona no hatao rehefa mikatso hatrany ny Skype amin'ny Windows 10?
Windows 10 dia miaraka amina troubleshooter namboarina izay afaka manampy anao hamaha olana ankapobeny amin'ny rafitrao. Indraindray ny fihazakazahana ity troubleshooter ity dia hanamboatra lesoka mifandraika amin'ny fampiharana toa ny fianjadian'ny Skype. Sokafy ny fampiharana Fikirakira amin'ny alàlan'ny fanindriana ny bokotra Windows ary I amin'ny fitendry anao. Raha tsy izany, azonao atao ny mandefa ny Settings avy amin'ny menio Start.